ဘယ်သူပြိုင်လို့ ဒန့် ပါတော့နိုင် - dancing dog
အတင်း ပြသူ - ဂျေဒန့်ဒန့်
ရိုက်ကူးသူ - လမ်းဘေးပရိသတ်
နေရာ - စပိန် လမ်းဘေး
မှီငြမ်း - ယူကျူ့အိုင်ကျူ့သူကျူ့ငါကျူ့ 
ကျော်ကြားမှု့- စပိန်တီဗွီတွင် ပါကတည်းက
ဆက်သွယ်ရန် - ညဘက် စပိန်နိုင်ငံ လမ်းတကာ လျောက်ကြည့်ပါ ကားမီးထွန်းပြီး ကနေလျှင် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အာမခံမှု့- အား ဒါတော့ ကျူပ် မသိဘူး။
ပေါ Paul - The Octopus
တမ်းတသူတွေ များလို့ဒီဂျေတယောက် ဘ၀င်မြောက်ရမလား။ လက်တို့ လို့ ဗြန်း ဆိုပြီး ဗြဲ ကနဲ ငိုရမလား၊
မနှစ်က ကမ္ဘာ ဖလားပွဲမှာ ၈ကြိမ်တိတိ ဒက်ထိ ဟောကိန်း ထုတ် ခဲ့တဲ့ ဘော်ဒိုပတ်လေး (ဘော်ဒါ+အော်တိုပတ်) ကြွသွားပြီ ဆို ကတည်း က ဒီဂျေ အပြီမဖြည်နိုင်တော့ပါ။
ယနေ့ မှ စပြီး ဘော်ဒိုပတ် မစားတော့ပါ။
မှတ်ချက်။ ။ နောက်ထပ် အပြင် မထွက်ခင် အထိ
လာရောက်မှတ်ချက်ရေးသူများ တိတ်တဆိတ် လာချောင်းပြီး လစ်သွားသူများ ဘော်ဒိုပတ်အား စိတ်တွင်းမှ ဖုတ်စားပြုတ်စား ချင်သူများ၊ ယခုလာမည့် ကမ္ဘာ ဘောပွဲ ခန့် မှန်းခြေ မရနိုင်လို့စိတ်ပျက်သွားသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်ခင်များ...
Funny - ရေဘ၀ဲ ကင်မရာနှင့် ဒိုင်ဗာ
ယူကျူ့ ထဲမှာ ပါလာတဲ့ သတင်းပါ။
နယူးဇီလန် ပင်လယ်မှာ ရေအောက် သဘာဝ ရှုခင်း ဓါတ်ပုံရိုက်နေသော ဒိုင်ဗာ၏ ကင်မရာကို အလစ်သုတ် ရေဘ၀ဲ တကောင်က ဇတ်ကနဲ လုယူ ထွက်ပြေး လေသည်။ ဒေါ်လာ ၇၀၀တန် အသစ်ချပ်ချွပ် ကင်မရာ ကို အဆုံး မခံနိုင် သဖြင့် သူခိုးနောက်လိုက် ပြီး ပြန်လုယူလေသည်။ ရေဘ၀ဲသူခိုးမှာ ရေကူးသန် သဖြင့် အတော် ကြိုးစား လိုက်ရသည်။ ခန့် မှန်းခြေ ၅မိနစ်မကပေ။ ရေအောက် သုံး သေနတ်ဖြင့် သူခိုးအား ခြောက်လှန့်ရင်း သူခိုးလက်ထဲ ရောက်နေ သော ကင်မရာကို ပြန်ယူရန် ကြိုးစားရသည်။ ရေဘ၀ဲမှာ ကင်မရာ ကို ဆော့ကစား လိုစိတ်သာ ရှိသဖြင့် ဒိုင်ဗာအား ရန်မပြုဘဲ ကင်မရာကိုသာ ပြန်လုယူလေသည်။ ရေဘ၀ဲ လက်များ မမှီနိုင်စေရန် ရေသေနတ်ဖြင့် ရေဘ၀ဲ သူခိုး အား တွန်းထိုး ထားပြီး ကင်မရာအား ပြန်သိမ်းလေသည်။ ရေဘ၀ဲအား လွတ်ရာ ကျွတ်ရာ သွားစေရန် သေနတ်အား လှုပ်ခါချသော်လည်း အဆော့သန် ရေဘ၀ဲမှာ သေနတ်ကို ဖက်တွယ် ထားလေသည်။ ဒိုင်ဗာမှာ ရေဘ၀ဲအား အခမဲ့ ရေကူးပို့ ဆောင်ရလေသည်။ ဗီဒီယို ကြည့်ပြီး ပြုံးစရာဖြစ်သောကြောင့် ဝေငှပါသည်။
(ဤဗီ ကို ရိုက်သူမဟုတ်)
Snake & Smoke
ကြိုတင်ဖြေရှင်းချက်။ ။ မရှင်မင်းရဲ့ smoke & spice ကို ကော်ပီစနိပ် copysnake လုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါကြောင်း။
ယခင်က တရုတ်ပြည်က လိပ်ကလေး ဆေးလိပ်စွဲတာ တင်ပြပေးဘူးပါတယ် ဒီလင့်မှာပါ။ အခုတော့ တိုင်ဝမ်မှ မြွေပါ ဆေးလိပ်စွဲနေသဗျ။ ဆေးလိပ်မရရင် ဒီမြွေတော့ ဒေါသထွက်ပြီး သခင်ကို ပါ မြိုမယ် ထင်တယ်။
သိချင်လား သောက်ကြည့်.. ..အဲအဲ အောက်မှ သတင်းကို ဖတ်ကြည့်
That's because the three-year-old reptile from Taipei in Taiwan has become hooked on nicotine, thanks to his owner Sho Lau's 20-a-day habit.
'He is very tame and one day when I threwacigarette butt away he went for it and seemed to enjoy having it in his mouth,' said 33-year-old Lau.
'One thing led to another and before long he was having one cigarette in the morning and another at night.'
'He gets very agitated if I don't have any to spare,' he added.
မှီငြမ်း ။ ။ မက်ထရိုသတင်း
ဆေးလိပ်ကြောင့် ကျွန်တော့မွေးစားဖခင် ဘကြီး အသက်၅၅နစ်အရွယ်မှာ ဆုံးပါးခဲ့ရပါတယ်။ အဖေ အသက် ၁၅နစ်မှာ ဆေးလိပ်စသောက်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းဖြတ်မရတော့ပါဘူး။ ဆေးလိပ်ကြောင့် အဖေ ရောဂါပေါင်းစုံခံစား ရတာ သိနေမြင်နေရတဲ့အတွက် သားများ ဆေးလိပ်မသောက်ကြပါ။ ဘလော့ကာ မိတ်ဆွေများလည်း ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားချင်ရင် ဆေးလိပ်ဖြတ်နိုင်တဲ့ ဆေးလိပ် အတုအကြောင်း ရေးထားတာ ဒီလင့်မှာ ဖတ်စေလိုပါတယ်။ စလုံးမှာ နေသူများ ဆေးလိပ်ဖြတ်ဆေးလိပ် မူစတာဖာတွင် အလွယ်တကူဝယ်လို့ ရကြောင်း တခြားနိုင်ငံမှလူများ အတွက် အီးဘေးတွင် အဆင်ပြေစွာဝယ်နိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ်။